ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေရှိရာကို ဇွဲအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေသူ အီသာရစ်ခ်ျ
ထိပ်ဆုံးနေရာကို ရောက်ဖို့အတွက် ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျ Etheridge
21 Aug 2018 . 4:10 PM
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ မတူညီတဲ့နိုင်ငံပေါင်း (၆၆)နိုင်ငံက ကစားသမားတွေ ပါဝင်ကစားနေပြီး အဲဒီထဲကမှ ပရိသတ်တွေ အာရုံစိုက်ခံနေရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒီကစားသမားကတော့ တန်းတက် ကာဒဖ်စ်အသင်းက ဖိလစ်ပိုင်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား အီသာရစ်ခ်ျ Etheridge ပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဖခင်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး မိခင်ဆီကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျဟာ လန်ဒန်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူ Filipina Merlinda Dula ရဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားပြုကစားဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အီသာရစ်ခ်ျဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်လို အင်္ဂလန်ထိပ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ သူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ ခရီးက ကြမ်းတန်းလွန်းခဲ့တယ်။ ဘောလုံးအားကစားနည်းကို ၀ါသနာ ပါလွန်းလို့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်၊ ကားတွေကို ရောင်းချပြီး ဘောလုံးသမားဘ၀ကို အသက်ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ရသူပါ။
၂၀၁၄ နွေရာသီမှာ သူ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ စတင်ခဲ့တဲ့ ဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့နောက် အီသာရစ်ခ်ျရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေက အဆုံးသတ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီသာရစ်ခ်ျကတော့ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မလွှတ်ချခဲ့ဘူး။ “အသင်းလက်မဲ့ဘ၀နဲ့ ကျွန်တော် (၅)လလောက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Career ကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပြီး ချာလ်တန်အသင်းမှာ လေ့ကျင့်ခွင့်ရဖို့အတွက် ကျွန်တော် ငွေပေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလတုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ကို ရောင်းခဲ့တယ်၊ ကားကိုလည်း ရောင်းခဲ့ရတယ်။ အင်္ဂလန်မြေကိုတောင် စွန့်ခွာပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ပြန်ဖို့အထိ စဉ်းစားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းထောက်မလို့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို အိုးလ်ဟမ်းအသင်းက အရန်ဂိုးသမားအဖြစ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့် ချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကဆိုရင် မန်ချက်စတာမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ သွားနေခဲ့ရပြီး အိပ်စရာနေရာမရှိလို့ ဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ပါ”လို့ အီသာရစ်ခ်ျက နောက်ကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အီသာရစ်ခ်ျက အိုးလ်ဟမ်းအသင်းအတွက် တစ်ပွဲသာကစားခဲ့ရပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူ အငှားနဲ့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ချာလ်တန်အသင်းက ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ အီသာရစ်ခ်ျက “အဲဒီတုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီကာလတွေဟာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
ဘ၀ဆိုတာက ‘ရေစီးတစ်ခါ ရေသာတစ်လှည့်’ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အီသာရစ်ခ်ျအတွက် ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာ ပေးတဲ့အလှည့်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၀ါဆောလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး (၂)နှစ်အကြာမှာပဲ ကာဒစ်ဖ်အသင်းဆီ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကာဒစ်ဖ်အသင်းကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်က စလို့ အီသာရစ်ခ်ျဟာ လက်စွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ (၄၅)ပွဲကစား၊ Clean Sheet (၁၉)ပွဲရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင် ကာဒစ်ဖ်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို တစ်ကျော့ပြန်တက်လှမ်းခဲ့တာမှာ အီသာရစ်ခ်ျရဲ့ လက်စွမ်းက အဓိကကျခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အရှေ့တောင်အာရှဘောလုံးလောက အတွက် ဂုဏ်ယူစရာမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲအပြီးမှာ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ ပယ်နယ်တီ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဟားလ်စီးတီးဂိုးသမား မက်ဂရီဂေါ် McGregor နောကပ်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဦးထွက်မှာ ပယ်နယ်တီ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သူအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ပယ်နယ်တီ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကာဒစ်ဖ်အသင်းအတွက် ဒီရာသီ ပထမဆုံး တစ်မှတ်ကို ရယူပေးခဲ့တယ်။ အီသာရစ်ခ်ျက “၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကျွန်တော့်အတွက် အောင်မြင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကလည်း အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား၊ ပထမဆုံး အရှေ့တောင်အာရှ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို မှတ်တမ်းဝင်ဖို့ ခရီးရှည်ကြီးကို ကျွန်တော် လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတာဖြစ်လို့ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ . . . အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆိုတာက လွယ်လွယ်ကူ ရယူနိုင်မယ့်အရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ အီသာရစ်ခ်ျက ထိုက်သင့်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီဆိုပေမယ့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် အများကြီး ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ဖန်တီးနေတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျကိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . . .
Photo:Cardiff City,ESPN,ABS-CBN News
ထိပျဆုံးနရောကို ရောကျဖို့အတှကျ ပိုငျဆိုငျသမြှတှကေို စှနျ့လှတျခဲ့ရတဲ့ အီသာရဈချြ Etheridge
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲမှာ မတူညီတဲ့နိုငျငံပေါငျး (၆၆)နိုငျငံက ကစားသမားတှေ ပါဝငျကစားနပွေီး အဲဒီထဲကမှ ပရိသတျတှေ အာရုံစိုကျခံနရေတဲ့ ကစားသမားတဈဦးရှိပါတယျ။ အဲဒီကစားသမားကတော့ တနျးတကျ ကာဒဖျဈအသငျးက ဖိလဈပိုငျလကျရှေးစငျဂိုးသမား အီသာရဈချြ Etheridge ပါပဲ။ အင်ျဂလိပျလူမြိုး ဖခငျနဲ့ ဖိလဈပိုငျလူမြိုး မိခငျဆီကနေ မှေးဖှားလာတဲ့ အီသာရဈချြဟာ လနျဒနျမှာ မှေးဖှားကွီးပွငျးခဲ့သူဖွဈပမေယျ့ မိခငျဖွဈသူ Filipina Merlinda Dula ရဲ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံအတှကျ ကိုယျစားပွုကစားဖို့ ရှေးခယျြခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အီသာရဈချြဟာ ပရီးမီးယားလိဂျလို အင်ျဂလနျထိပျတနျးအဆငျ့ပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျကစားခှငျ့ရဖို့ သူ လြှောကျလှမျးခဲ့ရတဲ့ ခရီးက ကွမျးတနျးလှနျးခဲ့တယျ။ ဘောလုံးအားကစားနညျးကို ဝါသနာ ပါလှနျးလို့ သူပိုငျဆိုငျတဲ့ အိမျ၊ ကားတှကေို ရောငျးခပြွီး ဘောလုံးသမားဘဝကို အသကျဆကျနိုငျအောငျ ကွိုးပမျးခဲ့ရသူပါ။
၂၀၁၄ နှရောသီမှာ သူ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ စတငျခဲ့တဲ့ ဖူလျဟမျအသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ရတဲ့နောကျ အီသာရဈချြရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေ အဆုံးသတျလုနီးပါးဖွဈခဲ့ရဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အီသာရဈချြကတော့ သူ့ရဲ့အိပျမကျတှကေို လှယျလှယျနဲ့ မလှတျခခြဲ့ဘူး။ “အသငျးလကျမဲ့ဘဝနဲ့ ကြှနျတျော (၅)လလောကျ ဖွတျသနျးခဲ့ရပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ Career ကို လမျးကွောငျးမှနျပျေါရောကျအောငျ ကွိုးစားခဲ့ရပွီး ခြာလျတနျအသငျးမှာ လကေ့ငျြ့ခှငျ့ရဖို့အတှကျ ကြှနျတျော ငှပေေးခဲ့ရတယျ။ အဲဒီအခြိနျကာလတုနျးက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှအေတှကျ အစှမျးကုနျကွိုးပမျးခဲ့ရပါတယျ။ အိမျကို ရောငျးခဲ့တယျ၊ ကားကိုလညျး ရောငျးခဲ့ရတယျ။ အင်ျဂလနျမွကေိုတောငျ စှနျ့ခှာပွီး ဖိလဈပိုငျနိုငျငံကို ပွနျဖို့အထိ စဉျးစားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးထောကျမလို့ အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ကို အိုးလျဟမျးအသငျးက အရနျဂိုးသမားအဖွဈ စာခြုပျခြုပျဆိုဖို့ကမျးလှမျးခဲ့တာကွောငျ့ ခကျြခငျြးလကျခံခဲ့တယျ။ အဲဒီမတိုငျခငျကဆိုရငျ မနျခကျြစတာမှာရှိတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျအိမျမှာ သှားနခေဲ့ရပွီး အိပျစရာနရောမရှိလို့ ဆိုဖာပျေါမှာ အိပျခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ”လို့ အီသာရဈချြက နောကျကွောငျးပွနျခဲ့ပါတယျ။
အီသာရဈချြက အိုးလျဟမျးအသငျးအတှကျ တဈပှဲသာကစားခဲ့ရပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ သူ အငှားနဲ့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ခြာလျတနျအသငျးက ပွနျလညျချေါယူခဲ့တယျ။ အီသာရဈချြက “အဲဒီတုနျးက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို စိတျဓာတျ ကွံ့ခိုငျလာအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့တယျ။ အဲဒီကာလတှဟော အတိတျမှာ ကနျြခဲ့ပွီဖွဈပမေယျ့ ကြှနျတျော ဘယျတော့မှ မနေို့ငျမှာ မဟုတျပါဘူး”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
ဘဝဆိုတာက ‘ရစေီးတဈခါ ရသောတဈလှညျ့’ ဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ အီသာရဈချြအတှကျ ကံကွမ်မာက မကျြနှာသာ ပေးတဲ့အလှညျ့ကို ရောကျရှိခဲ့ပါပွီ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ဝါဆောလျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး (၂)နှဈအကွာမှာပဲ ကာဒဈဖျအသငျးဆီ ရောကျရှိခဲ့တယျ။ ကာဒဈဖျအသငျးကို စတငျရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျက စလို့ အီသာရဈချြဟာ လကျစှမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂျခနျြပီယံရှဈမှာ (၄၅)ပှဲကစား၊ Clean Sheet (၁၉)ပှဲရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တဲ့အပွငျ ကာဒဈဖျအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကို တဈကြော့ပွနျတကျလှမျးခဲ့တာမှာ အီသာရဈချြရဲ့ လကျစှမျးက အဓိကကခြဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ အရှတေ့ောငျအာရှဘောလုံးလောက အတှကျ ဂုဏျယူစရာမှတျတမျးဖွဈတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဖိလဈပိုငျကစားသမားဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို ဘုနျးမောကျနဲ့ပှဲအပွီးမှာ စိုကျထူနိုငျခဲ့တယျ။
နောကျပွီး ဘုနျးမောကျနဲ့ပှဲမှာ ပယျနယျတီ ကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ၂၀၁၃ ခုနှဈက ဟားလျစီးတီးဂိုးသမား မကျဂရီဂျေါ McGregor နောကပျပိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျပှဲဦးထှကျမှာ ပယျနယျတီ ကာကှယျနိုငျခဲ့သူအဖွဈလညျး မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး၊ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာလညျး ပယျနယျတီ ကာကှယျနိုငျခဲ့ပွီး ကာဒဈဖျအသငျးအတှကျ ဒီရာသီ ပထမဆုံး တဈမှတျကို ရယူပေးခဲ့တယျ။ အီသာရဈချြက “၂၀၁၈ ခုနှဈက ကြှနျတေျာ့အတှကျ အောငျမွငျတဲ့ နှဈတဈနှဈလို့ ဆိုရမယျ။ ကြှနျတျောတို့အသငျး ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျရောကျလာခဲ့တယျ၊ ဖိလဈပိုငျအသငျးကလညျး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ အာရှဖလားခွစေဈပှဲ အောငျမွငျခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျကလညျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား၊ ပထမဆုံး အရှတေ့ောငျအာရှ ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို မှတျတမျးဝငျဖို့ ခရီးရှညျကွီးကို ကြှနျတျော လြှောကျလှမျးခဲ့ရတာဖွဈလို့ တကယျ့ကို ဂုဏျယူစရာပါပဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
ပရိသတျကွီးရေ . . . အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျဆိုတာက လှယျလှယျကူ ရယူနိုငျမယျ့အရာ မဟုတျဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ အခုအခြိနျမှာ အီသာရဈချြက ထိုကျသငျ့တဲ့ လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ရောကျနပွေီဆိုပမေယျ့ အဆငျ့အတနျးတဈခုကို ရောကျဖို့ဆိုရငျတော့ နောကျထပျ အမြားကွီး ကွိုးစားရပါဦးမယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျမကျတှကေို ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ ဖနျတီးနတေဲ့ အီသာရဈချြကိုတော့ ကြှနျတျောတို့တှေ ခြီးကြူးဂုဏျပွုရမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . . .